अचानक छोरी रोएपछि दौडेर जाँदा कोठामा कोही थिएन, निकै भयानक थियो रुनुको कारण, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अचानक छोरी रोएपछि दौडेर जाँदा कोठामा कोही थिएन, निकै भयानक थियो रुनुको कारण
एजेन्सी। अमेरिकामा एक जोडीको लागि एक रात निकै भयानक भयो । उनीहरुले बच्चाको कोठामा क्यामेरा राखेका थिए । त्यो क्यामेराको मनिटरबाट अनौठो आवाज आउन थाल्यो । जब उनीहरुले मनीटरमा हेरे क्यामेरा आफैं घुमिरहेको थियो । साथमा कुनै एक व्यक्ति चिच्याइरहेका थिए । उनीहरु दौडेर छोरीको कोठामा गए तर त्यहाँ कोही थिएन् । तर, त्यही बेला क्यामेरा उनीहरुतर्फ घुम्यो र क्यामेराको स्पिकरबाट भयानक आवाज आउन थाल्यो । आवाज रोक्न उनीहरुले क्यामेरा नै बन्द गरिदिए ।
ओहियोको हेब्रोन शहरको हो । यहाँ हीदर शेरेक र उनका पति एडमले १० महिनाकी छोरी एम्मालाई सुताएर आफ्नो कोठामा गएका थिए । आधा रातमा एम्माको कोठाबाट आवाज आउन थाल्यो । यो आवाज उनीहरुकी छोरीको नभइ कुनै पुरुषको थियो । उनीहरुले मनिटरमा हेर्दा क्यामेरा आफैं घुमिरहेको थियो । कोही पुरुष जोड जोडले चिच्याइरहेको थियो । अन्ततः उनीहरुले क्यामेरा नै बन्द गरिदिए ।
यो घटनाको पछाडिको वास्तविकता निकै खतरनाक भएको अनुसन्धानबाट खुल्यो । यो क्यामेरा इन्टरनेट जडित थियो र कसैले क्यामेरा नै ह्याक गरेको थियो । त्यही व्यक्तिले क्यामेरा आफैं घुमाउने र आफ्नो आवाज यहाँ पठाइरहेको थियो । त्यो व्यक्तिले पूरै घरका क्यामेरा ह्याक गरेर पूरै घरको निगरानी गरिरहेका थिए । यसरी घरका सबै कुरा हेरेर घरमा चोरी वा अन्य घटना हुने खतरा थियो । क्यामेरा कसले ह्याक गरेको थियो भन्ने थाहा हुन सकेको छैन ।